जोसमा होस गुमाउने प्रहरी इन्सपेक्टरको जागिर चैट, को हुन उनि ? — Imandarmedia.com
जोसमा होस गुमाउने प्रहरी इन्सपेक्टरको जागिर चैट, को हुन उनि ?
काठमाडौं। संगठनमा सुधार ल्याउन नसकेपनि व्यक्तिगत रुपमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने व्यक्ति कमै भेटिन्छन्। तर, उनै महानिरीक्षक क्षेत्रीले घुस खाने गरेको,
भनेर बारम्बार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि प्रहरी मुख्यालयमा हल्लाखल्ला मच्चिएको छ। कतिसम्म भने महानिरीक्षकको सचिवालय मातहतकै उजुरी छानबिन,
शाखाबाटै उनले मासिक चार लाख बुझ्ने गरेको भनेर विस्तृत विवरणसहितका उजुरी अख्तियारमा पर्न थालेको छ। उजुरीका कतिपय सूचना हेर्दा हो कि जस्तो देखिने खालको छ।
देशभरिका प्रहरीउपर पर्ने उजुरीउपर कारबाही नगरी उनले पैसा लिने गरेको विवरण त्यसमा एललेख छ। जुन विषय प्रहरी बाहेक अन्यलाई थाहा हुने प्रकृतीको छैन । तर, वास्तविकता भने पूर्ण रुपमा झुटो रहेछ।
आफ्नै महानिरीक्षकविरुद्ध कसले झुटा उजुरी दिइरहेको छ भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक रुपमा छानबिन गर्यो। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै कार्यरत एक प्रहरी अधिकारीको संलग्नता थियो।
इन्सपेक्टर राजु कुर्मीले महानिरीक्षकलाई हैरानी दिएका थिए। कुर्मीको विषयमा विस्तृत बुझ्दा प्रदेश २ मा उनको आतंक चलाएको खुल्यो।अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयमा कार्यरत कुर्मीले प्रदेशभरीका प्रहरीलाई ‘तेरोविरुद्ध उजुरी परेको छ।
भन्दै धम्काएर मासिक पैसा बुझाउन लगाउने गर्दथे। पैसा नदिनेलाई मुख्यालयको उजुरी छानबिन शाखामा उजुरी गरी हटाउने लगाउने शैली अपनाउँदै आएका थिए। उजुरी छानबिन शाखाले,
ती प्रहरीलाई नहटाएको रिसमा उनले प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध नै अख्तियारमा उजुरी हालेर दुःख दिएका थिए। विस्तृत अनुसन्धान गर्दा उनी बर्दी लगाएका ‘अपराधी’ रहेको खुलेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ।
सिपाहीबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका उनी यसअघि सर्लाहीमा कार्यरत थिए। त्यहाँ अनियमिततामा मुछिएपछि उनको सरुवा भएको थियो। तराईका सबैजसो घुमुवालाई धम्काएर पैसा असुली गर्दै आएको समेत छानबिनमा खुलेको छ।
तराईमा कुर्मी जस्ता बर्दी बेचेर कमाउने धेरै प्रहरी कार्यरत रहेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाई छ। जो सधैं स्थानीय नेता र प्रहरीका केही हाकिमलाई खुशी बनाएर एकै कार्यालयमा कार्यरत रहेर लुट मच्चाइरहेका थिए।
तेस्तै, नेपाल प्रहरी सङ्गठनभित्र ‘नम्र बोली, भद्रभाषा, शालीन व्यवहार र शुद्ध आचरण’ जस्ता नारा ‘एकादेशको फल आँखातरी मर’ जस्तै भएको छ। त्यो नहोस् भनेर प्रहरी कर्मचारीको आचरण सुधार तथा बोली व्यवहार परिवर्तनका लागि नेतृत्व तहबाट पटक पटक निर्देशन जारी हुने गरेको छ।
गहमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत तल्लो दर्जाका प्रहरीहरुले उपेक्षा गरेको पाइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्तर्गत निरीक्षणालय उजुरी छानबिन एकाइ मा प्रहरी कर्मचारीको बोली व्यवहार, आचरण र क्रियाकलापसँग सम्बन्धित दैनिक १० वटासम्म उजुरी पर्ने गर्छन्।
उजुरीको यो सङ्ख्याले नै प्रहरीको भाषामा समस्या छ भन्ने देखाउँछ । त्यस्ता उजुरीको निरीक्षणालय प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अनुराग द्विवेदीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले स्थलगत छानबिन तथा अनुसन्धान गरी,
सख्त चेतावनीदेखि निलम्बनसमेत गर्ने गरेको बताइएको छ तर पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यसै भएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गत कात्तिक ५ गते प्रहरी सङ्गठनभित्र सम्मानार्थी भाषा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए।
तर प्रहरी सङ्गठनभित्र मात्र होइन प्रहरीले आम नागरिकका लागि प्रयोग गर्ने बोली पनि सम्मानपूर्ण हुँदैन ।त्यस्ता निर्देशनले धेरैजसो हाकिम ९उच्च अधिकृत०लाई नछुने भएकाले नै यस्तो समस्या देखिएको चर्चा प्रहरी सङ्गठनभित्रै हुने गर्दछ ।
सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ अनुसार, ‘सुधार र परिवर्तन’ नेतृत्व तह ९माथि०बाट सुरु हुनुपर्छ तर यस्ता निर्देशन तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी लक्षित हुने भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको हो।
प्रहरी सङ्गठनभित्र माथिल्लो तहका अधिकृत कर्मचारीले तल्लो तहका कर्मचारीलाई गर्ने बोली व्यवहार परिवर्तन गरी ‘तँ’ र ‘तिमी’ जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न नगराउन गृह मन्त्रालयले पनि निर्देशन दिएको छ तर त्यसको जानकारी नै तल्लो तहमा पुग्दैन।